नेकपा विवाद– अविश्वासको प्रस्तावको त्रासमा माधव नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्दै ओली ! - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ७ : ५७
काठमाडौं । भदौं २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयपछि केही मत्थर देखिएको सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवाद पुनः चुलिएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम नसकिँदै नेकपा चर्को उल्झनमा फसेको छ ।
भदौं २६ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तीबारे सचिवालयमा छलफल गर्ने लगायतका १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्तावका आधारमा दुवै अध्यक्ष चल्नुपर्ने भएपनि दुवैतिरबाट त्यसको उल्लंघन भइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा सल्लाह नगरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र राजदूतहरु नियुक्त गरेपछि देखिएको विवाद कर्णाली प्रदेशमा प्रचण्ड निकटका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही विरुद्ध पूर्व एमाले पक्षधर सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि थप चुलिएको हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरुबाट नेता माधव कुमार नेपाल समूहका सांसद ब्याक भएपछि ओली पक्ष अल्पमतमा परेको थियो ।
त्यसपछि विकसित घटनामा पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले फरक फरक निर्देशन नेकपाको कर्णाली प्रदेशलाई जारी गरेपछि पार्टी फुटको सानिध्यमा पुगेको कतिपयको अनुमान रहेको छ ।
केही समय यता दैनिक छलफलमा जुटेका दुई अध्यक्षबीच कर्णाली प्रकरणपछि सौहार्द रुपमा कुराकानीसमेत हुन सकेको छैन ।
कात्तिक ४ गते केहीबेर कुरा गरेका ओली प्रचण्डबीच त्यसयता कुरा हुन सकेको छैन ।
ओलीले बालुवाटार बोलाइरहेको भएपनि प्रचण्ड बालुवाटार नगएको स्रोतको दाबी छ ।
माधव नेपालसँग नजिक हुन खोज्दै ओली
प्रचण्डसँगको सम्बन्धमा खटपट भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमारको साथ खोजेका छन् ।
यसबीचमा ओली र नेता नेपालबीच केही पटक बालुवाटारमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । तर छलफलमा ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन ।
नेपालसँग एक्लाएक्लै कुराकानी हुनथालेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र नयाँ समीकरण बन्न लागेको हो की भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
तर नेपालनिकट नेताहरुले भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिलेसम्म भएका छलफलबाट आफूहरुको धारणामा कुनै परिवर्तन नआएको बताए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय नआउन्जेल नयाँ समीकरण बन्ने संभावना नरहेको बताए ।
असहज पर्दा एउटालाई च्याप्ने र अर्कोलाई पाखा लगाउने व्यवहार प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउँदै आएको भन्दै नेपाल पक्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनी निकट एक नेताले बताए ।
तर प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर प्रचण्डलाई छोड्ने पक्षमा नेता नेपाल नरहेको ति नेताको भनाई छ ।
प्रचण्डसँग सहकार्यका लागि समझदारी गरिसकेको अवस्थमा उनलाई पाखा लगाउने पक्षमा नेता नेपाल नरहेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको योजना सफल हुने सम्भावन तत्काल देखिएको छैन ।
प्रचण्डलाई मनाउन ‘दूत परिचालन’
प्रचण्डसँगको सम्बन्ध बिग्रिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका दुई मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौं बोलाएका छन् ।
उनीहरुलाई ओलीले दूतको रुपमा खुमलटार पठाएको भएपनि कुनै सहमति बन्नभने सकेको छैन ।
ओलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई काठमाडौँ झिकाई वार्ताका लागि परिचालन गरेका हुन् ।
ओली आफैले फोनमार्फत छलफलका लागि बालुवाटार आउन पटकपटक गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका प्रचण्डलाई मनाउन उनले आफ्ना विश्वास पात्रहरुलाई काठमाडौँ बोलाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार बिहीबार नेता पोखरेल ओलीको विशेष दूतकारुपमा प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा पोखरेलले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नै गरेर अघि बढ्न ओली तयार रहेको प्रचण्डलाई बताएका थिए ।
तर प्रचण्डले भने पार्टीका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै ओलीले उल्लंंघन गर्दा आफू र आफनो सिंगो पार्टीलाई अपमान महशुस भएको पोखरेलसमक्ष राखेका थिए ।
पोखरेलले तिहारलगत्तै व्यापक रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने गरी दुई अध्यक्षले फेरि संवाद थाल्नुपर्ने बताएका थिए तर पोखरेलको प्रस्तावमा प्रचण्ड सकारात्मक नदेखिएको उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए ।
त्यसअघि प्रचण्डलाई मनाउन बुधबार महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ पनि खुमलटार पुगेका थिए । उनीहरूसँग पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर गुनासो गरेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावको चर्चा
ओली विरुद्ध प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा यतिवेला नेकपा वृत्तमा चलिरहेको छ ।
ओली निकट उच्च तहका नेताहरुले नै उक्त समूहले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसरत गरिरहेको गरेका स्रोतको दाबी छ ।
सकेसम्म पार्टी भित्रैबाट नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग मिलेर भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनmे बारे प्रचण्ड नेपालसमूहमा छलफल भएको ओली पक्षको आशंका छ ।
पार्टी निर्णयविपरीत काम गरेको र सरकारसमेत बदनाम गराउन लागेको भन्दै ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा गोप्यरुपमा हस्ताक्षर गर्ने काम भइरहेको ओली निकट एक नेताले बताए ।
बिहीबार ओलीनिकट नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो ।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको भेटमा भर्खरै उक्त कार्यालय हेर्नेगरी जिम्मा पाएका ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सहभागी थिए ।
भेटमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीबारेको पनि चर्चा चलेको एक नेताले जानकारी दिए । “प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छन् भन्ने सूचना पाएको छु,” एक नेताले भने ।
तर, प्रचण्ड नेपाल पक्षधर नेताहरुले भने अविश्वासको प्रस्ताव बारेको अफवाह ओली पक्षका नेताहरुले नै चलाएको आरोप लगाएका छन् ।
‘यस बारेमा छलफल भएको छैन, उहाँहरु समस्यालाई डाइभर्ट गर्नका लागि योजनावद्ध रुपमा लागिरहनु भएको छ,’ प्रचण्ड नेपाल समूहका एक नेताले भने ।
नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि यसलाई आधारहिन हल्लाको संज्ञा दिएकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन्, अयोग्यता छोप्न यस्तै आधारहिन हल्ला गरेरै भएपनि केही समय टिक्न सकिन्छ भनेर फेरि थालिएछ अर्को हल्ला । अनि आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर मोर्चा कस्न राजधानी छिरेछन् क्षेत्रपालहरु !’
अयोग्यता छोप्न यस्तै आधारहिन हल्ला गरेरै भए पनि केही समय टिक्न सकिन्छ भनेर फेरी थालिएछ अर्को हल्ला? अनि आफ्नो ज़िम्मेवारी छोडेर मोर्चा कस्न राजधानी छिरेछन क्षेत्रपालहरू!
— Ram kumari Jhakri (@Jhakri_didi) October 29, 2020